Izindaba - I-Coverall Coverall kanye neGown Yokuhlinza yeGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co., Ltd. izokhonjiswa
Kuzokhonjiswa nge-Coverall Cover and Gown Yokuhlinzwa yeGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co, Ltd.
Ku-Beijing International Medical Device Exhibition 2020
Izingubo zokuvikela ezokwelapha, okokugqoka okuhlinzekwayo, okokuzihlukanisa, amamaski okuhlinza okwelashwa nezinye izinto zokwelashwa nezinto zokwenziwa sanitary ezikhiqizwe yiGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co., Ltd. zethulwe embukisweni i-Beijing International Medical Devices Exhibition obuse China International Exhibition Center kusukela ngomhlaka 23 Septhemba kuya ku-25,2020. I-Beijing International Medical Devices Exhibition ihlanganisa yonke imikhiqizo kufaka phakathi izinto zokwelashwa nezinto zangasese, imishini yokuhlola kanye nama-reagents wokuxilonga, nobuchwepheshe bolwazi lwezokwelapha. Isebenzela umkhakha wedivayisi yezokwelapha ngokuqondile nangokuqondakalayo kusuka kumthombo kuye ekugcineni. Isikhathi ngasinye sabathengi nabathengisi besibhedlela abangama-30000 abavela emazweni angaphezu kwama-20, abenzeli baqoqa ukuthengiselana kwesayithi lombukiso, ukushintshana.
IGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co., Ltd.njengocwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwelinye lonke uchungechunge lwezimboni lwemishini yezokwelapha amabhizinisi asezingeni eliphakeme, selokhu yasungulwa, ahambisana nezimpawu zomhlaba wonke, zobungcweti zomgwaqo wentuthuko. Kusuka ezingutsheni zokuvikela ibanga lezokwelapha, okokugqoka okuhlinzekwayo, imaski yokuhlinza yezokwelapha ukukhuthaza ukukhushulwa komkhiqizo, imboni emisha nentuthuko njengomsebenzi wabo. Kusukela ekukhiqizweni kuya ekuthengiseni, ukuqaliswa okuqinile kokugeleza kwabagibeli, ukuphathwa kokuphambukiswa kwempahla, ukukhiqizwa okuphephile nokuhlanzekile, inzalo ephelele, ukuhlolwa okuthuthukile okuzenzakalelayo ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo iphephile futhi inokwethenjelwa, ezibhedlela, abathengisi, abenzeli ukuhlinzeka ngemithi ethembekile evela Umthombo womkhakha wokugcina wezinsizakalo ezibanzi.
IGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co., Ltd.sakhe amamitha ayisikwele angama-4000 efektri ehlanzekile neyesitayitela eXinfeng County, eGanzhou City, esifundazweni saseJiangxi, esihlangabezana nezidingo zokukhiqiza zamadivayisi ezokwelapha. Inendawo yokugcina impahla, ukuhlola nokuhlola, izindawo zokubulala amagciwane nezokuvikela abasebenzi, ulayini wokukhiqiza othomathikhi. Ingakhiqiza okokwembatha kwezokuvikela, okokugqoka okuhlinza ngokwezokwelapha, okokwehlukaniswa kwezingubo zokwelashwa, imaski yokuhlinza yezokwelapha, izifihla-buso zezokwelapha ezilahlwayo nezimaski zokuzivikela zansuku zonke, imaski yothuli i-KN95 neminye imikhiqizo ehlangabezana nezindinganiso zikazwelonke. Inganikezela ngezidingo ezahlukahlukene nezigaba zemishini yokuvikela ukunakekelwa kokuhlinzwa esibhedlela nokuvikelwa kwabantu abajwayelekile.
IGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co., Ltd. iyaqhubeka nokuzinikela odabeni lwezempilo, idala "impilo yesikhathi esizayo", isungula uhlelo lwezimboni ezihlakaniphile, iqaphela ukumbozwa kwayo yonke imikhiqizo kusuka ezintweni ezingavuthiwe, kuxhaxha lwezimboni, kwezokukhiqiza, kwezentengiso nakubathengi, ukuqala phansi, uhlela ukuvikelwa kwezempilo kwaso sonke isintu. Ngaphezu kwalokho kusebenze yonke imvelo embonini yezokwelapha, ngokuhlelwa kochungechunge lwemboni yezempilo, ukuhlanganisa izinsiza zabakhiqizi, ukukhuthaza imboni yezokwelapha neyezempilo nomsebenzisi njengomongo, impilo njengomthwali, ikhwalithi njengesisekelo kanye nokwelashwa okuhlakaniphile njengoba isiqondiso. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obukhulu bemininingwane ukwakha ipulatifomu yokuphathwa kwezempilo, kufaka phakathi ukusebenza nabakhiqizi bemishini abagqokekayo, izikhungo zezokwelapha, iminyango yezempilo kahulumeni nokunye ukubambisana ekwakheni uhlelo lokuphathwa kwezempilo, ukufeza ushintsho endimeni kusuka ekwelashweni kuye ekuvimbeleni.
IGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co., Ltd. imema ngobuqotho wonke amayunithi asembonini yezokwelapha nabasebenza ukuvakashela!
Amahora wokuvula: 23-25 ​​Septhemba 2020
Sikhungo indawo: China International Isentha Centre
Umgwaqo u-6 Bei San Huan Dong, Isifunda saseChaoyang, eBeijing